Samy manana andraikitra, hono… | NewsMada
Samy manana andraikitra, hono…
Fanilihana andraikitra? Na fanamarinan-tena ho tsy mba mety diso, tsy mahomby… Fitenin’ny mpitondra tato ho ato hatrany ny hoe samy manana andraikitra amin’ny zava-tsy mety eto amin’ny firenena ny rehetra…
Efa tena mahavery fanahy ny vahoaka izao ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-bary, ny ady sy fandrobana tany… Samy tomponandraikitra amin’izany, hono, ny tsirairay. Nahoana loatra?
Toy ny hoe avy amin’ny vahoaka ifotony iny ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-bary, ny ady sy fandrobana tany… Manjaka izany fa tsy mandray andraikitra ny tsirairay, fa tsy hoe tsy fidiny…
Ekena, mety manana izay andraikitra tandrify azy tokoa ny tsirairay sy ny vahoaka ifotony amin’ny filazana vaovao na fampandrenesana mialoha ny mpitandro filaminana momba ny asan-jiolahy, ohatra.
Inona, ohatra, no azon’ny olon-tsotra (h)atao manoloana ny fandrobana tany? Na mitaraina sy mipepipepy etsy sy eroa aza, tsy misy mihaino na miraharaha… Avela hanjaka tsinona ny vahiny sy ny tsy fanta-piaviana?
Ho aiza koa manoloana ny fidangan’ny vidim-piainana? Na hiantsoroka andraikitra inona amin’izany… Ny fanjakana natao hisahana sy karamaina amin’izany aza, tsy hita izay tena ataony sy vitany.
Takina amin’ny mpitondra ny tamberin’andraikitra amin’izay mampitaraina ny vahoaka. Izy ireo no nampindramina fahefana ho amin’izany, mampiasa ny volam-panjakana, fitaovam-panjakana, olom-panjakana…
Raha atao hoe manana andraikitra tokoa ny vahoaka na ny olom-pirenena: mba akana hevitra ve amin’ny fanapahan-kevitra? Eny, na eo aza ireo hoe solom-bavany eny anivon’ny Antenimierampirenena.
Mba misy fakan-kevitra ve, ohatra, amin’ny fampiharana ny Dina, rehefa tsy vita ny tany tan-dalàna? Tsy tian-kano tsy tian-kano ve ny vidim-piainana, ary tsy misy fampahafantarana mialoha ny fandrobana tany?
Tsy mihetsika ny mpitondra, raha tsy amin’izay manohintohina azy: toerana, tombontsoa, henatra ho afa-baraka, fa tsy takona afenina ny fahoriam-bahoaka. Fialana ihany ny hoe samy manana andraikitra?